Yintoni Umsebenzi we-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Yintoni umsebenzi we-Instagram
Julayi 7, 2019 0 IiCententarios 651
Okwangoku, baninzi abantu abazekayo yintoni Umsebenzi we-Instagram, kwaye inyaniso kukuba imisebenzi yayo yahlukahlukene kakhulu. Eli qonga limele enye yenethiwekhi zentlalo kunye ne-boom engakumbi kunye nokusebenzisana okwenzeka kwihlabathi jikelele, ke ayimangalisi into yokuba ekukhuleni okuqhubekayo. Ngendlela efanayo, imele enye yeenkqubo zokukhuphela okuninzi, kunye ngene kunye noTumblr.
Ngokusekwe kuloo nto, namhlanje sithetha nawe malunga yintoni Umsebenzi we-Instagram. Okona kubalulekiyo ngoku kunxulumene nolusomashishini kunye nentengiso yedijithali, kuba ngenxa yokuba liqonga elinxulumene ngokusondeleyo nolawulo lweefoto kunye nevidiyo, sisixhobo esibaluleke kakhulu kwabo banqwenela ukutyala imali kwintengiso kunye nokukhulisa uphawu lwabo .
I-Instagram yinethiwekhi yentlalo enikezelwe ngokukodwa kulawulo lweefoto kunye nevidiyo. Liqonga apho abasebenzisi bayo bahlala khona unxibelelwano lwexesha lokwenyani ngenxa yokuhamba komxholo okulawulwa rhoqo. Ikwanayo nephuli yeefilitha kunye nokugcina iifoto kwakhona, okwenza ukuba amava enefoto abe ngumxholo onomdla kakhulu nolonwabisayo kubasebenzisi abawuphetheyo.
Ngendlela efanayo, yindawo enomdla, eyonwabisayo nebonakalayo yenethiwekhi yoluntu ekhuthaza unxibelelwano oluhle kakhulu phakathi kwabasebenzisi bayo. Inikezela ngendawo ebanzi yokujonga ii-brand zakho ozithandayo okanye izihloko zakho ezinomdla; Ndikusebenzisa ukunxibelelana kwaye ndidibane nabantu abanokuzonwabisa okanye izinto abazithandayo ezinjengezakho.
I-Instagram yayiliqonga elenziwe ngonyaka i-2010 kwaye ababhali bayo nguKevin Systrom noMike Krieger. Eli qonga lalinayo kwaye liqhubeka nempumelelo ebanzi. Ukusukela kwiminyaka yokuqala yokudalwa kwayo yafumana ngaphezulu kwe-100 yezigidi zabasebenzisi; Okwangoku bangaphezulu kwe-1000 yezigidi abasebenzisi abasebenzayo kwihlabathi liphela.
Impumelelo enkulu yesi sicelo yaba yinethiwekhi yokuqala yoluntu yokufaka iifilitha eziphambili zeefoto. Ngokunjalo, yathatha inxaxheba ekukhuleni kweendawo ebizwa ngokuba zii "selfies", kwaye yangenela ubuchule ngenxa yokusetyenziswa kwayo kusetyenziswa zixhobo zeselfowuni.
Yintoni umsebenzi we-Instagram? Apha siyakuxelela!
Ngaba ukhe uzibuze yintoni umsebenzi we-Instagram? Umsebenzi we-Instagram usekwe ikakhulu ekwabelaneni ngemifanekiso okanye kwiividiyo, ukusebenzisa iifoto ukuphinda usebenzise iifilitha ezinikezwe sisicelo. Ngokusekwe kwezi tweaks eziphambili, ubuchule bakho bedijithali buyaphucuka, buba sisixhobo esibalulekileyo xa umxholo usetyenziselwa ukubhengeza uphawu lwakho okanye imveliso.
Kwakhona, xa kufunyanwa yintoni Umsebenzi we-Instagram sifumana phakathi kweyona nto ibaluleke kakhulu ukucoca kwakhona kunye nokufota. Ezi zixhobo zivumela imifanekiso elayishwe kule nethiwekhi yentlalo ukuba ibe yeyona nto ilungileyo; Babonelela ngenkangeleko yobungcali kubo. Ngenxa yoku, abasebenzisi abaninzi bonwabile ngeli qonga kunye nokulula kwako ukusetyenziswa.
I-Instagram: isetyenziswa njani?
Ukongeza ekusombululeni umbuzo we yintoni umsebenzi we-InstagramKukwabalulekile ukuqaqambisa indlela esetyenziswa ngayo. Into ephambili ekufuneka uyenzile kukukhuphela usetyenziso, faka kwaye wenze iprofayili. Emva koko, kuya kufuneka ugcwalise idatha abayifunayo. Nje ukuba umsebenzisi wakho wenziwe, ungaqala ukukhangela izihloko ozithandayo kwibhari yokukhangela kwaye uqalise ukulandela abasebenzisi abanomdla kakhulu.
Emva kwexesha, unokufaka kwakhona amaxesha abalulekileyo okanye imicimbi evela kwi-smartphone yakho kwiifoto kunye nevidiyo. Ke, i-Instagram iyakuvumela ukuba ubenoluhlu olubanzi lokucoca kunye nokugcina iifoto kwakhona. Ndiyabulela kule nto, unokunxibelelana kwaye ubhence imisebenzi yakho efanelekileyo yokufota kubahlobo bakho, kunye noluntu lwe-Instagram ngokubanzi.
Kutheni kufuneka usebenzise i-Instagram?
Enye yezona zinto zibalulekileyo malunga yintoni Umsebenzi we-Instagram Inxulumene nentengiso kunye nentengiso yedijithali. Okwangoku, ibe liqonga elisisiseko kunye nesixhobo sosomashishini nokukhuthaza iincutshe ezahlukeneyo ngeevenkile ekuthiwa zikwi-Intanethi.
Namhlanje, ibranti ezinkulu kwihlabathi liphela ziye zakhula kakhulu ngenxa yokubonelelwa yile network yoluntu. Ke ukuba lithuba elilungileyo lokunxibelelana nokubonisa inani elikhulu leemveliso. Konke oku ngokusebenzisa indawo ekugxilwe kuyo yeqonga njengeefoto, amabali kunye nevidiyo.
Kwelinye icala, ukuba uyazibuza yintoni Umsebenzi we-Instagram kunye nemisebenzi yayo ebalaseleyo, ezo ezinokubaluleka kokunxibelelana kwintanethi yoluntu zonke ezinxulumene nokufota, ubugcisa kunye uyilo lwevidiyo ngokusekelwe kwimixholo yokuhamba, uyilo, ifashoni, ukutya, phakathi kwabanye. Iqonga lolawulo lwentengiso olukhokelayo kula macandelo, aba yimodeli yokubhala kunye nokuphefumlela.
I-Instagram: Zeziphi izibonelelo ezinikezelayo?
Namhlanje, i-Instagram ikunika izibonelelo ezininzi, ukusuka ekubuyiseleni iifoto zayo phambili ukuya kwisilingo esihle ngokusekwe yintoni Umsebenzi we-Instagram Ngokumalunga nentengiso kunye nentengiso yedijithali. Kweli nqaku siza kuthetha ngeyona nto ibalaseleyo inikezwe yile nqonga:
Isimahla: nangona yenye yezona zinto ziqwalaselwayo kwihlabathi liphela, ayinamali. Yiyo loo nto uninzi lweebranti kunye neevenkile ze-Intanethi luzuza, njengoko zinokusebenzisa iiprofayili zazo njengomboniso obalaseleyo kumashishini abo.
Okungasikelwanga mda: ngumgangatho ogqwesileyo, kuba awunawo umda wokupapashwa komxholo kwiprofayile yakho.
Ukubonakala okukhulu: kuba okwangoku yenye yezicelo ezinabasebenzisi abaninzi kwihlabathi liphela, ukufikelela ngaphezu kwe-1.000 yezigidi zabasebenzisi abasebenzayo, kuya kukuvumela ulawulo oluhle kunye nokubonakala komxholo wakho, ukufikelela inani elikhulu labantu.
Igalelo elipheleleyo lokufota: linenani elikhulu lokucoca phambili eliya kukuvumela ukuba wenze iifoto ezisemgangathweni kunye nevidiyo, onokwabelana ngazo nabahlobo bakho okanye abalandeli.
Iindlela ezifanelekileyo zonxibelelwano: ukulawula ukuseka unxibelelwano neqela lakho labahlobo ngeendlela ezahlukeneyo, ngokuthumela imiyalezo yabucala kunye nokushicilela okumileyo kunye okwethutyana.
Ikhuthaza umdwebi: ukuba babe ngabavelisi kunye nabadali beiyantlukwano yomxholo wokuvelisa, kunye nokunyanzelwa kweemveliso okanye iinkonzo.
Yintoni umsebenzi we-Instagram?: Algorithm
Yonke imihla kukho abantu abangakumbi abazibuza yintoni Umsebenzi we-Instagram, ukufumana ukuba i-algorithm yayo ijongeka ngakumbi njengo-Facebook ngoku. Kungenxa yokuba i-Instagram ifunyenwe ngabanini be-Facebook, kuthathelwa ingqalelo izinto ezininzi zeqonga, esiya kulichaza ngezantsi:
Ixesha: yinto leyo enoxanduva loku-odola iimpapasho ezisandula ukwenziwa. Ngaphambili babehlelwa ngomhla kunye nangexesha; Okwangoku oku kulungisiwe.
Imbali edlulileyo: eli nqaku lisekwe kwintsebenzo yomsebenzisi; Unxibelelwano oluninzi lukhona phakathi kweeprofayile ezimbini ku-Facebook, kokukhona baya kuba nombono omnye komnye.
Ukuzibandakanya: Ichukunyiswa linani "lokuthandwayo" kunye "neenkcazo" ezipapashiweyo ezifumanekayo, zinokulinganisa ngakumbi ezo zinokuhlangana okuninzi koluhlobo, kuthathelwa ingqalelo imiyalezo ngqo.
Amabali e-Instagram: isetyenziswa njani?
Nje umbuzo we yintoni umsebenzi we-Instagram, ungaya kwezinye izixhobo ezinikezelwa yiyo, ezinje ngeBali le-Instagram. Ukuba yenye yeenkonzo ezintsha ezenziweyo liqonga, amabali e-Instagram sisixhobo esikuvumela ukuba uthumele uhlaziyo, njengemifanekiso okanye iividiyo. Bachitha ixesha leeyure ze-24, apho bonke abalandeli bakho banokuthi babajonge.
Kwelinye icala, esi sixhobo khange siphumeze ukhetho lokuphawula; Nangona kunjalo, kuvunyelwe ukuthumela imiyalezo yabucala. Ukwenza oku, kuya kufuneka ufake ibali elihambelanayo kunye nokuhambisa iscreen ukusuka ezantsi ukuya phezulu. Ngendlela efanayo, apha unokujonga kwakhona abantu abalubonileyo upapasho lwakho; Uluhlu lwe-Instagram lubadwelise njengababukeli.
Ngokukwanjalo unikwa ukhetho lokwenza upapasho lwakho lubhengezwe esidlangalaleni okanye hayi. Ukwenza oku, kuya kufuneka uye kwibali lakho, uswayite isikrini esivela ezantsi phezulu kwaye ukhethe abasebenzisi ongafuniyo ukukubona ukupapasha kwakho ngokukhetha "ukufihla ibali"; Unokuvumela okanye unqande imiyalezo. Ukufumana ulwazi ngakumbi: Ungathumela njani kwiimbali ze-Instagram?
I-Instagram Live: Yenzelwe ntoni?
Kungumsebenzi onokufikelela kuwo kwiMbali. Inika ithuba lokuba wabelane ngevidiyo ngexesha elifanelekileyo kunye nabalandeli bakho. Nangona kunjalo, nje ukuba ukusasaza kugqityiwe, ividiyo ayisayi kubakho kwi-Instagram.
Ukuqala ividiyo, kufuneka ubeke inketho ekunene kwesokunxele kwesikrini, ngendlela efanayo naleyo ungongeza ibali. Emva koko, kuya kufuneka ukhethe ukhetho "bukhoma" kunye "nokuqala ividiyo" ngokulandelelana. Kwimeko apho ufuna ukongeza izimvo, cofa nje ukhetho "lokuphawula", kwaye uluqaqambisa kufuneka ugcine ucinezelwe.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukugxininisa ukuba kwimeko yokudala i-akhawunti yakho ye-Instagram kutshanje, kunokwenzeka kakhulu ukuba ungabelani ngevidiyo ebukhoma.
1 I-Instagram: Yintoni?
2 Yintoni umsebenzi we-Instagram? Apha siyakuxelela!
3 I-Instagram: isetyenziswa njani?
3.1 Kutheni kufuneka usebenzise i-Instagram?
4 I-Instagram: Zeziphi izibonelelo ezinikezelayo?
5 Yintoni umsebenzi we-Instagram?: Algorithm
6 Amabali e-Instagram: isetyenziswa njani?
7 I-Instagram Live: Yenzelwe ntoni?
Julayi 5, 2019
Iingcebiso ezili-9 zokwenza kufuneka uphile kwi-Instagram
Julayi 7, 2019
Funda indlela yokwenza iphepha lemidlalo kwaye uqale ukuzonwabisa!